Madaxdii siday gurmad ka yimi Banaadir oo maanta tegaya meelaha xoolaha lagu qaybiyo (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 21, 2013 5:02 b 0
Garoowe, December 21, 2013 – Deeganada Puntland waxaa weli ku sugan wefdi balaaran oo ka socda maamulka gobolka Banaadir iyo xubno kale oo ka tirsan rugta ganacsiga Soomaaliya, ?Kuwaas oo Puntland keenay gargaar loogu talo-galay dadkii dufaantu haleeshay.
Madaxda ka socda gobolka Banaadir ayaa maalmo ka hor Garoowe soo gaarsiiyey lacag dhan $200 oo kun oo dollar, lacagta ayaa waxaa la wareegay gudiga gurmadka ee jooga Garoowe, kadib wareejinta deeqda, ?wefdiga ayaa kulamo la qaatay maamulka.
Maxamuud Cismaan Maxamuud (Taako) oo ah gudoomiyaha waaxda warshadaha ee rugta ganacsiga ee Soomaaliya oo isna ku jira wefdiga isla markaasna la hadlay Daljir, ?waxaa uu sheegay in ay la kulmeen soo dhowayn baaxad leh oo ay filayeen.
?Siyaasadu ma kala fogayn karto dadka Soomaaliyeed, habka naloogu soo dhoweeyey Puntland waa mid heerkeedu sareeyo oo aan filaynay, aad baan maqsuud uga nahay hanaanka naloo soo dhoweeyey.? Ayuu yiri mudane Taako.
Madaxda ka socda gobolka Banaadir iyo xubnaha kale ee ku jira wefdiga ayaa maanta booqanaya goobaha ay ka socdaan bixinta xoolaha loogu talo-galay dadka masiibadu haleeshay, sida uu sheegay Maxamuud Taako wefdiga ayaa kadib ku noqonaya Muqdisho
Dhegeyso: – Cabdirisaaq Silver oo daljir ka tirsan ayaa waraystay Maxamuud Cismaan Taako